Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Manampahefana Nametra-pialàna Taorian’ny Nilazany Fa Tsy Afaka Ny Ho Tonga Mpitsara Ny Zanaky Ny Mpandraoka Fako · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Mey 2015 3:18 GMT 1	 · Mpanoratra Mohamed Hassan Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Bahrain, Ejipta, Foko sy Fiaviana, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ny piramida sosialin'ny Ejipta fahagola, arakaraky ny hatongavanao amin'ny ambony indrindra no maha-olona misylanjany anao sy mampivoatra ny fiainanao. Na fony Ejipta fahagola aza, azo natao ny fikisakisahana.
Afaka ho tonga mpitsara ve ny zanakalahin'ny mpanadio tanàna?Tsy ao Ejipta izany, hoy i Mahfoodh Saber, Minisitry ny Fitsarana ao amin'io firenena io, izay nitondra fanoherana niraradraraka ny fanehoankevitra nataony ka nanery ilay minisitra hametra-pialàna.
Ny 11 May, Saber niteny tao anatin'ny tafatafa iray tamin'ny fahitalavitra hoe :
Mila olona iray niainga avy amin'ny tontolo mifanaraka tsara amin'izany asa izany ny asanà mpitsara, ka miala tsiny amin'ireo mpanadio tanàna na ireo antonontonony na ambany. Ilaina mba mifanaraka amin'izany ny tontolo nitaizàna ilay mpitsara. Tsy milaza aho hoe tsy maintsy ambony be fa kosa tsy tokony ho ambany be. Isaorantsika ireo rehetra mpanadio tanàna niezaka nampianatra zanaka, saingy ny fanomezana toerana ho mpitsara ny olona iray avy amin'izany tontolo izany dia hampijaly azy, noho ny rarintsaina sy ny olana hafa. Hahatonga azy tsy ho afaka ny hanohy.
Na fony Ejipta fahagola aza, azo natao ny fikisakisahana sosialy. Nalefa niana-draharaha teny amin'ireo mpanao asa tànana ireo zanaka tantsaha ary dia afaka ny niakatra saranga ambony kokoa teo anivon'ny fiarahamonina. Ny marina dia tsy hoe fotsiny nitàna toerana iray ny saranga tao Ejipta, fa nahatafintohina olona maro kosa io tsy fahafahana mikisaka ara-tsosialy io. Toy ny miteny ilay minisitra teo aloha hoe na hiasa mafy toy inona aza ary tafita tamin'ny fianarany ny olona iray, dia tsy ho afaka ny hahazo tamby izay ho entiny manatsara ny sàtany sosialiny.
Ohatra, rasina ho asa be karama ny maha-mpitsabo manerana izao tontolo izao. Kanefa, marihan'i Riham Abdelstar, Ejiptiana iray mpitsabo, ny fandraisan'ireo mpitsabo miasa amin'ny hopitaly eo amin'ny 20 Dolara Amerikana fotsiny isam-bolana:
Taorian'ireo taona marobe nianarana sy niofànana, dia ho mpitsabo miasa amin'ny hopitaly aho, herintaona sy tapany taty aoriana ary mandray 150 paondy Ejiptiana [20 dolara amerikana] isam-bolana sy mandoa 5 paondy isanandro ho saram-pitaterana
Ny fanehoankevitr'ilay minisitra dia vao mainka nahatonga ireo Ejiptiana hampiaka-peo momba ny fitomboan'ny tsy fitoviana sy ny fanavakavahana ara-tsaranga ao Ejipta. Ao amin'ny Twitter, Kareem Samy nibitsika hoe:
Miha-manjavona tsikelikely ireo tantaram-pahombiazan'ireo zanakalahinà mpanadio tanàna na hafa koa izay nahazatra antsika ny nandre azy. Ho fampahafantarana, ny fomban-drazana sy ny fahambonian-tsaranga izao no manefy/manova ny fiarahamonintsika
Nanery ilay minisitra hametra-pialàna ireo valinteny tamin'ilay fanambaràny. Izany tsy nanakàna ny adihevitra mikasika ny saranga sosialy ho lasa resaky ny tontolon'ny haino aman-jery sosialy Ejiptiana. Ilay mpanao sariitatra, Islam Jawish, izao mihomehy ilay tranga amin'ity kisary hatsikana ity:
- Marina izany, tsy natao ho lasa minisitra ny zanakalahin'ny mpanadio tanàna – Nahoana? Noho ny resaka tsangananasy fijery ivelany ve? -Tsia, Satria izy madio.
Ho an'ny Ejiptiana anefa dia tsy midika fiafarànan'ny fanavakavahana anefa ilay fametraham-pialàna. Bassel Khaled manontany tsara mihitsy hoe :
Araka izany [taorian'ilay fametrahana fialàna] afaka ny ho lasa mpitsara ve ankehitriny ny zanakalahin'ny mpanadio tanàna?
Iray hafa mpampiasa Twitter no nanamarika ny tsy maha-ara-dalàna ny tohan-kevitra tahàka izany araka ny voalazan'ny lalàm-panorenana Ejiptiana :
Tsy takatry ny minisitry ny fitsaràna fa nanao heloka bevava tsotra izao azo saziana araka ny lalàna izy
[dikanteny avy amin'ny sary: Mitovy daholo eo anatrehan'ny lalàna ny olom-pirenena rehetra. Mitovy zo, fahalalahana ary andraikitra ankapobeny, tsy misy fanavahana miainga avy amin'ny ara-pivavahana, finoana, maha-lahy sy vavy, fiaviana, foko, volonkoditra, fiteny, fahasembanana, saranga sosialy, fiaviana politika na jeografika na antony hafa.
Heloka bevava sazian'ny lalànany fanavakavahana sy ny fiantsoana fanavakavahana.
Handray ny fepetra sahaza ny Fanjakàna hamongorana izay rehetra endrika fanavakavahana, ary ny lalàna no hamaritra ny fananganana kaomity miahy tena hanatanteraka izany.]
Nahatonga hadrohadro sy eso avy amin'ireo diplaomaty aza ilay adihevitra. Ny masoivoho Britanika ao Ejipta, John Casson, nibitsika hoe:
Te-hiasa ato amin'ny masoivoho Britanika ve ianao? Raisinay daholo ny olona rehetra ary rasinay ny zanaky ny mpanadio tanàna
Nizarazara be ihany ny fanehoankevitra naterak'ilay bitsiky ny masoivoho, teo ireo naniry ny handroahana azy hiala ny firenena ary teo ireo niarahaba ny fahaizany misangy.
Tsy vao voalohany niresahana io olona io tao Ejipta izao. Tany aloha dia niteny zavatra tsy nisy hafa tamin'izany ny lefitry ny lehiben'ny Fitsaràna mpandrava didy.
Ny zava-misy hoe tsy nandalo fotsiny tahaka ireo tranga tany aloha ity tranga iray ity dia mety midika fa misy fitomboany ny anjara toerana raisin'ny media sosialy izay toerana ahafahan'ny olona maka vaovao misimisy kokoa sy mifampiresaka. Mazava ho azy fa tsy misolo ny tsy fisian'ny fanarahamason'ny solombavambahoaka nateraky ny fanemorana ny fifidianana akory io. Kanefa, ny zava-misy dia mahavelom-panantenana ny firesahan'ny olona avy amin'ny karazana vondrona samihafa ny anjara toeran'ny fanavakavahana ara-tsaranga any anatin'ny rafi-panjakana.
Any amin'ny toerana niaviako dia zara raha tsikaritra ny zavatra tahakaizany rehefa mitranga sy tsy misy akony, hoy i Abu Omar Al Shafee, mpampiasa Twitter avy any Bahrain :
ireo fanendrena vaovao ho amin'ny toeran'ny mpampanoa lalàna ao Bahrain: nozaraina ho an'ny zanakalahin'ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta, ireo mpikambana fahiny tao amin'ny parlemanta ary ireo olona eo amin'ny fitondràna…Fanavakavahana inona moa ilay resahanareo?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/05/19/70270/
 tafatafa iray tamin'ny fahitalavitra hoe : https://www.youtube.com/watch?v=UNVYzTxng8g